काठमाडौ : परिवारको कान्छी छोरी हुन् नबिना अर्थात खुइली। २०६४ सालमा बुबाको मृ’त्यु भयो।घरमा भएका सबै छोरीको बिहे भैसकेकाले गर्दा अब त्यो घरमा नबिबा र उनको आमा मात्रै बस्न थाले।
केही समयपछि नबिना आफ्नो आमालाई लिएर काठमाडौँ आइन्।काठमा डौँमा दु:खसुख जीवन चलिरहेकै थियो।
कला क्षेत्रमा नबिनालाई आमाले नै सपोर्ट गर्द थिन्।बुबा गुनाएको १० वर्षपछि नबिनाले आमालाई पनि गुमाइन्।
क्या’न्सरले थलिएकी आफ्नी आमालाई बचाउनको लागि भरपुर कोसिस गर्दा पनि भगवानको अगाडि उनको केजी सीप लागेन।
आफ्नो जन्मदिने बुबाआमालाई गुमाएपछी नबिनाले शम्भु थापा,बखतेलाई नै आफ्नो बुबा मान्दै आइरहेकी थिइन्।शम्भु दाइले पनि उनलाई आफ्नो छोरी जस्तै माया गर्दै आइरहेका थिए।
शम्भु दाइले भनेको एउटा कुराले गर्दा नविना अझैपनी मूर्छा पर्ने गर्छिन्।अन्तिम चो’टी हुनसक्छ शम्भु दाइले नबिनालाई तिम्रो बिहे गरेर खुट्टा धोएर दिन मन छ भनेको अझै पनि सम्झन्छिन् नबिना र बारम्बार शम्भु दाइको मन मष्ति’ष्कमा आइरहन्छन् शम्भु दाइ।
उनले सिरियलमा बाबुछोरीको रुपमा अभिनय गरिरहेको सम्बन्ध रिलमा मात्रै सिमित थिएन।यो सम्बन्ध बिस्तारै बिस्तारै रियलमा परिणत भैसकेको थियो।आज पापी कोरोनाले शम्भु दाइलाई हामी माझ बस्न दिएन।खुइलीले रुँदै भनिन्,टुहुरी छोरीले बल्लतल्ल एउटा सहारा बनाएकी थिइन्,मेरो आँखामा किन यसरी खुसी देख्न सकेनौं ?
मेरो खुसी किन देख्न चाहाँदैन यो भगवान भन्दै भ’क्कानिएर रु’न थालिन्। उनले आफ्नो फेसबुक मार्फत लेखेकी छिन्,अन्तत मलाई टुहुरो बनाएरै छोडिस्यो है डेडि जन्मदिने बुबाआमा नरहे पनि हजुरलाई नै बुबाआमा मानेको थिए र हजुरबाटै बुबाआमाको माया पाएको थिएँ।
तर हजुरले पनि यसरी बिचबाटोमै मलाई छोडेर टु’हुरो बनाइसिन्छ भन्ने कल्पनामा पनि सोच्न सकेको थिइन। केही भन्न र सोच्न पनि सकेको छैन डेडि म टुहु’रो भएँ, मलाई गाह्रो भयो डेडि,कसरी गरुँ यो हातले हजुरलाई अ’न्तिम बिदाई।
जे नहुनु पर्ने थियो त्यो भयो । बखते दाइ तपाईको मृ’त्युको खबर लेख्दा हात कापिहरेको छ । आज यो भ’गवानलाई मज्जाले गा’लि गर्न मन लागेको छ । भगवान तिमिले ती नारीको दु:ख किन देखेनौ ? जसले आफ्नो श्रीमान ब’चाउन श्रीमतिले गरेकि पुकार किन सुनेनौ भगवान तिमिले ?
बुवा ब’चा’उन छोरिले गरेको मेहेनत किन देखेनौ भगवान ? आमाको मृ**त्यु भएको सात दिन मात्र भएको थियो । बखते दाइ आमाको काज’किरि’यामा बस्नु भएको थियो ।
केही दिन अघि मात्रै हल्का रमाइलो कमेडी सिरियलमा को’रोना लागेको अभिनय गरेका बखतेले यतिबेला त कोरो’नालाई जितेका थिए र खुसी बाँडेको अभिनय गरेका थिए तर त्यो अभिनय आज अभिनयमै सिमीत रह्यो।रियल लाइफमा भने उनले को’रोनालाई जि’त्न सकेनन्।
पापी को’रोनाले आमाको क्रिया गर्न बसेको बेला पनि छोडेन।तपाईंको आत्माले चीर शान्ति पाओस् बखते दाइ। एक्कासी कोरोनाको नजर कलाकार बखतेको शरीरतिर लाग्यो ।शरीरमा अप्ठ्या’रो अनुभव भए पछि शम्भु थापालाई तुरुन्तै ललितपुरको पाटन अस्पतालमा भर्ना गरियो । कोरोनाको लडा*इ लड*दै थिए शम्भु दाइ, कोरो’नाको कारण फो’क्सोमा नि’मोनिया देखा पर्यो ।
निमोनियाले फोक्सो ड्या’मेज भै सकेको रहेछ । डाक्टरहरु अहो’रात्र लागि परे शम्भु दाइलाइ ब’चा’उन । तर डाक्टरको पनि भगवानको अगाडि केही च’लेन । लामो समयसम्म पाटन अस्पतालको भेन्टि’लेटरमा उपचा’र गराइरहनु भएका हामी सबैको प्यारो कलाकार बखते दाइलाइ आज स’दाको लागि बिदाइ गरेको छ ।
२०७८ भाद्र १६, बुधबार १२:०२ गते 1 Minute 320 Views